China pp yakachengetedzwa cage keji, pallet mudziyo storages bhokisi Mugadziri uye mutengesi | Sihai
pp chemarata ekuchengetera keji
P chemarata akachengetedzwa keji inogadzirwa ne pp inogona simbi, iyo pombi yakakomberedzwa imadziro uye padhi yakaturikidzana yejiji yekuchengetera, maererano nehukuru hwakasiyana hweseji, iyo p hollow jira inogona kugadzirwa yakaitwa saizi yakakura, iyo pepa remarata zvakare inogona kupeta, iyo pp yakakora bhodhi mapatya-madziro akakwana kuchengetedza zvigadzirwa kana uchifamba uye mutero. P corrugated cage keji uye kupeta yekuchengetera keji, shavishavi keji, inounyanzvi yakasimba keji, mutero wekuchengetera yekuchengetera keji, simbi keji, nezvimwewo, yakajairwa mudziyo midziyo, inonyanya kushandiswa mune inorema kana hombe zvinhu zvekuchengetedza uye michini inotenderera inobata, kunyanya yakakodzera kushandiswa kwemaindasitiri senge mota, midziyo yemumba, michina, Hardware, muEurope neUnited States neJapan, Taiwan nedzimwe nzvimbo zvakashandiswa zvakanyanya.
Huru zvinhu zvekukomba mhango yekuchengetedza keji yakadzika kabhoni simbi waya uye p chemarata bhodhi. Kana keji yekuchengetera isina chinhu, inogona kupetwa uye kuchengetwa kuti ishandise zvizere nzvimbo. Parizvino, keji yekuchengetera yave yakatakurika, yakapetwa uye inotakurika, uye ichiwedzera kuve yakakosha standard logistics mudziyo wekutenderera kwezvinhu.
Mapeji Hollow ndiro yekuchengetedza keji chimiro maficha:
1. Unified maratidziro, akaiswa chinzvimbo, akajeka chengetedzo, nyore kudura yekuchengetera.
2. Forklift, simudza uye kireni zvinogona kushandiswa kurongedza mativi mana nemumwe kuti aone matatu-epamhepo chengetedzo.
3. Nyore oparesheni, yakafara kushanda uye hwakareba hupenyu hwebasa.
4, iko kushandiswa kwesimbi yakasimba waya yekubata kutenderera, iyo yepazasi yeU-chiteshi yekutenderera inosimbisa, yakasimba solid mamiriro.
5. Ne forklift, trolley, hydraulic pallet rori nemimwe michina, inogona kushandiswa kutakura, kubata, kurodha uye kudzikisa, kuchengetedza uye zvimwe zvinongedzo.
6. pp hollow inoshandiswa se liner kudzivirira kubvaruka kwezvinhu zvidiki uye kuchengetedza iyo yekuregedza workpiece.
Pashure: pp chemarata pepa nevha, epe furo
Zvadaro: mapeji erudzi rwekutora bhokisi rine furemu
Corrugated Plastiki Sheet
Corrugated Plastic Mapepa
Tsika Yakagadziriswa Bhodhi
ESD storages bhokisi
Plastiki Corrugated Pp Chinyorwa Sheet
epurasitiki pallet bhokisi
epurasitiki pallet bhokisi bin
epurasitiki pallet keji
Plastiki Pp Mudziyo
epurasitiki pp inofamba bhokisi
Mapeji Corrugated Bhokisi
P Corrugated Plastiki Yekuchengetedza Bhokisi
Mapeji Corrugated Kuchengeta Bhokisi Mudziyo
Mapeji Corrugated Kuchengeta Kurongedza Bhokisi
pp pallet bhokisi
p pallet mudziyo
pp chengetedzo keji
pp cage cage. p epurasitiki storages bhokisi
chengetedzo inofamba bhokisi
Kuchengetedza Pp Corrugated Bhokisi